Ka xannibo barta Instagram ➡️ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Ku xaddid Instagram-ka
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 0 comments 325
Ama farriimo aan ku habbooneyn, faallooyin diiradda saaraya inaad ku weeraraan sabab la'aan, iyo isticmaaleyaasha loo arko inay yihiin Xanaq“Si aan isku dayno, ma ahan inaan sameynno waqti naga lumiya dadka noocan ah, iyo inta badan shabakadaha bulshada ma bixiyaan qalab lagu iska indhatiro, loo aamuso oo loo xannibo.
Barta 'Instagram' waa mid aad u fudud, oo kaliya dhowr guji waxaan waqti u heli doonnaa booskeena shaqsiyeed halkii aan ka walwali lahayn in looga tago daabacadahayada. Ama waan iska aamusin karnaa oo qarin karnaa, si aanaan uga tagin gabi ahaanba bannaankayaga, sida saaxiibku noqon karo "sun ahWaxaan u baahanahay inaan raacno.
Ikhtiyaarradan si ballaaran looguma xusin bulshada dhexdeeda cabsi laga qabo in dadku si khaldan ugu adeegsadaan, laakiin uma baahnid inaad ka walwasho taas, maadaama Instagram ay ogtahay waxa lagu sameeyo qalabkan tiro badan oo adeegsadayaal firfircoon, iyo sahlanaanta furitaanka iyo xannibaadda qof kasta. Waxaan ku tusi doonaa sida loogu guuleystay.
Fursadaha xanibaada Instagram.
Sida loo xannibo isticmaaleyaasha aan loo baahnayn ee 'Instagram': Waxaan aadi doonnaa astaantaada, adoo gujinaya username , xaga sare ee menu-ka, waxaan riixnaa 3-da qodob, iyo xulashooyinka ay sii deyso ayaan dooranay 'In la xakameeyo'. Xaqiiji qufulka oo isticmaalaha ayaa laga xiri doonaa.
Waa laga xannibi karaa isticmaale kasta, Macno malahan hadii uu yahay mid raacsan, adigaa raacaya, ama lama yaqaan. Waxay kaa horjoogsaneysaa inaad aragto qoraalkiisa, sheekooyinka waxayna sidoo kale ka horjoogsataa inuu kula soo xiriiri karo farriimaha tooska ah. Waa waxtar haddii aadan rabin inaad wax ka ogaato qofkaas ama aad dooneysid inaadan macluumaad ka helin iyaga.
Dhawaan ikhtiyaar cusub ayaa lagu daray qufulka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad xannibato xisaabta isticmaaleha iyo dhammaan waxa uu abuuro, Adoo tixgelinaya inaad ku abuureyso isticmaaleyaashan isla kumbuyuutar ama aalad moobayl ah, aadna waxtar ugu leh adeegsadayaasha uu dhibaateeyo qof gaar ah.
Waa inaad ogaataa in xannibaadda qof sameyn doono astaantaada guud waa suurtagal in la helo, sidaa darteed haddii tani ay kuugu egtahay habka ugu dambeeya ee adiga, waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka aamusnaanta.
Muxuu aamusiyaa adeegsade barta Instagram?
Ciladeynta adeegsade waa u fudud tahay sida loo xannibo, tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad adeegsade kuu raaco oo aad aragto waxyaabaha aad ka kooban tahay, laakiin ma arki doontid mid ka mid ah waxa ku jira, tags, iyo sheekooyin, Si aad u sameyso waa inaad sameysaa talaabooyinkan.
Raadi daabacaadda isticmaale si aad u raadiso, waxay noqon kartaa qof kasta.
Guji saddexda dhibic ee ka muuqda daaqadda xulashada daabacaadda.
Guji ikhtiyaarka "Aamusnaanta", calaamadee nooca nooca aad rabto inaad aamusto.
Xaqiiji oo bogga waa la cusbooneysiin doonaa
Xusuusnow in, xitaa haddii aadan arkin, faallooyinkaan wali waxay u muuqan doonaan kuwa adeegsadayaasha kale u muuqda, marka haddii tani ay tahay tan aad adiguba rabtid, waad xaddidi kartaa marin-u-helkooda inay wax kuu soo qoraan, sidaa darteed ma xannibi kartid gebi ahaanba, laakiin ah la macaamil iyaga la dhaqan ahaan waa wax aan macquul aheyn
Sida loo xakameeyo isticmaale barta Instagram
Sidoo kale, taasi, xannibaadda isticmaale, waxaan u tagnaa magacooda cinwaankooda, waxaanna gujineynaa menu-ka geeska kore.
Waxaan gujineynaa 3da qodob oo aan doorannaa 'Xaddidaadda'
Xariif ah! Ma jiro farriin ka socota adeegsadaha oo dadka kale u muuqan doona, farriimaha tooska ahna ma gaari doonaan sanduuqaaga boostada.
1 Fursadaha xanibaada Instagram.
2 Muxuu aamusiyaa adeegsade barta Instagram?
3 Sida loo xakameeyo isticmaale barta Instagram
Sidee loo tirtiraa koontada 'Instagram'?